जव श्रीमानको अवैध सम्बन्ध श्रीमतीले थाहापाइन ! - सुनाखरी न्युज
जव श्रीमानको अवैध सम्बन्ध श्रीमतीले थाहापाइन !
Posted on: January 9, 2021 - 7:52 am
रुसको राजधानी मस्कोमा श्रीमानको अवैध सम्बन्ध श्रीमतीले थाहा पाएपछि यसको निकै भयानक परिणाम आएको छ । रुसको राजधानी मस्कोको सडकमा एक हाइप्रोफाइल डान्सरको बीच सडकमा हत्या गरिएको छ । ३० वर्षकी नतालिया प्रोनिनाको रुसका एक प्रतिष्ठित नेतासँग सम्बन्ध रहेको दावी गरिएको छ । उनले आफ्नो कोरियोग्राफी सेसन पूरा गरेर घर फर्किने क्रममा बाटोमा एक व्यक्तिले गोली हानेर उनको हत्या गरेका थिए ।
डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार हत्या गर्ने व्यक्तिले मास्क र कालो चस्मा लगाएका थिए । हत्या गरेपछि ती व्यक्तिले घटनास्थलमा स्टल ग्रेनेड छोडेका थिए । ग्रेनेडका कारण त्यहाँ निकै तीब्र प्रकाश फैलिएर मानिसहरुले हेर्न नसक्ने भएका बेला उनी मौका पाएर भागेका थिए । पुलिसले उनको हत्या नेताकी श्रीमतीले गराएको हुन सक्ने आशंकामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । नेताको नतालियासँग सम्बन्ध रहेको र यसबारे नेताकी श्रीमतीले थाहा पाएपछि नतालियालाई धम्की आउन सुरु भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।
पुलिसले यी हत्यारा भाडाका हत्यारा रहेको र नतालियालाई मार्न उनलाई सुपारी दिइएको विश्वास गरेको छ । नतालियाका ३३ वर्षका ब्वाइफ्रेण्डले हत्या कसले गरेको भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै घटनाको समय आफू जागिरको सिलसिलामा क्रिमियामा रहेको बताएका छन् ।